Isahluko 50 | IVANGELI LOKUFIKA KOMBUSO
Onke amabandla nabo bonke abangcwele kufanele babheke esikhathini esedlule kanye nasesikhathini esizayo: zingaki izenzo zenu zesikhathi esedlule ezifanelekile, futhi zingaki kuzo ezaba neqhaza ekwakhiweni kombuso? Ungabi yisihlakaniphi! Kufanele ubone ngokucacile ubuthakathaka bakho futhi kufanele uqonde izimo zakho. Ngiyazi ukuthi akekho kinina ozimisele ukwenza umzamo futhi azikhandle noma nini ngalokhu, ngakho anikwazi ukuthola noma yini. Nichitha sonke isikhathi senu ekudleni, ekuphuzeni, nasekujabuleni. Lapho abambalwa kini bebuthana niyadlala, ningakunaki ukuhlanganyela ngezindaba zokomoya empilweni noma ukunikezana ukuphila. Angikwazi ukubekezelela ukunibona nihleka futhi nincokola lapho nikhuluma, kodwa futhi niyinhlekisa kakhulu. Ngishilo izikhathi eziningi, kodwa aniyazi nhlobo incazelo yengikushoyo—ngabe lokhu akuyona into esobala ngendlela yokuthi ilapha phambi kwakho? Ngizishilo izinto ezifana nalokhu ngaphambili kodwa anikakholwa futhi anikwamukeli engikushoyo, nicabanga ukuthi anginiqondi ngokufanele, nicabanga ukuthi lokho engikushoyo akuyikho okwangempela. Kunjalo, angithi?
Uma ubhekana Nami ngokunganaki khona-ke ngizokubeka eceleni. Lokotha futhi wenze ngokunganaki! Phinda ulokothe ungacabangi futhi unganaki! Amazwi Ami awummese osikayo; noma yini engahambisani nentando Yami izosikwa ngalo mmese, futhi awudingi ukuba nokucabangela ukuzihlonipha kwakho kakhulu. Ngiyakusika ukuze ube nesimo futhi uhambisane nentando Yami. Ungaqondi inhliziyo Yami ngokungalungile; indlela okuwukuphela kwayo eyamukelekile ngeyokuthi ucabangele inhliziyo Yami ngakho konke okungenzeka. Uma ukhombisa ngisho okuncanyana ukucabangela, ngeke ngikufulathele. Ungahlali ukuziba kalula nje; indlela okuwukuphela kwayo eyamukelekile ngukuba uvumele intando Yami ukuba yenziwe njalo kuwe.
Inqwaba yabangcwele yonke ibekwe ezikhundleni ezahlukene, ngakho ngempela nonke ninemisebenzi eyahlukene. Kodwa kufanele nenze konke okusemandleni enu ukuzikhandlela Mina ngobuqotho, futhi umsebenzi wenu ngukwenza konke eningakwenza. Kufanele nethembeke kulokhu, nizimisele ngentokozo, futhi kufanele ngempela ningabi nokudembesela! Uma kungenjalo, ukwahlulela Kwami kuyohlala kuphezu kwenu, inyama, umoya nomphefumulo wenu ngeke ukwazi ukukubekezelela, futhi kuyoba nokukhala nokugedla kwamazinyo.